कास्कीमा किन बढ्दो क्रममा छ, कोरोना संक्रमण ? :: सिर्जना खत्री :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कास्कीमा किन बढ्दो क्रममा छ, कोरोना संक्रमण ?
प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रयास असफल
सिर्जना खत्री शनिबार, असोज २४, २०७७, १५:०२:५४
काठमाडौं- नेपालमा पहिलो पटक माघ १० गते कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पाँच महिनापछि गण्डकी प्रदेशको राजधानी कास्की जिल्लामा पनि कोरोना देखियो।
स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बाबुराम आचार्यका अनुसार कास्कीमा जेठ २३ गते कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि निरन्तर कास्कीमा कोरोना संक्रमित देखिन थाले। उनका अनुसार असोज २१ गतेसम्म कास्की जिल्लामा १ हजार १ सय १२ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् भने १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
कुल संक्रमित संख्यामध्ये ६ सय २२ जना कोरोनामुक्त भइसकेका छन् भने अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या ४ सय ७७ रहेको छ। संक्रमितहरु कोही होम आइसोलेसनमा छन् भने कतिपय अस्पतालमा उपचाररत छन्।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विभिन्न निकायले निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि त्यो सफल भएको देखिँदैन। बरु पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण बढ्दो रहेको स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बाबुराम आचार्य बताउँछन्।
नेपालामा पर्यटकको धेरै आवातजावत हुने जिल्लामध्येको एक हो कास्की। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने कास्कीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिन चैतदेखि नै पूर्वतयारी थालिएको थियो। जसअन्तर्गत सुरुदेखि नै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर निमार्ण गर्न सुरु गरेको आचार्य बताउँछन्।
‘कोरोना भाइरस फैलिएको सुरुवाती दिनमै नेपाल सरकारले पनि महामारी नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म तयारी गरिरहेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्देशनसँगै कास्की जिल्लाले पनि कोरोना रोकथाम गर्न तयारी सुरु गरिसकेको थियो,’ आचार्यले भने, ‘कास्की जिल्लाको पर्यटकीय महत्वलाई केन्द्रमा राखेर यदि कसैलाई संक्रमण देखिहाल्यो भने उपचार गर्नको निमित्त हामीहरुले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई तयारी अवस्थामा राखेका थियौँ।’
त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले सुरुवाती चरणमा नै जिल्लामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बसेर मात्रै जिल्लामा प्रवेश गर्ने नियम बनाएको थियो। क्वारेन्टाइनमा बस्नेको पिसिआर परीक्षण गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गराउने काम भएको आचार्यले जनाए।
जिल्ला भित्र रहेका स्कुल, कलेजहरुलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गरिएको थियो। विस्तारै क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या बढेसँगै स्थानीय तह र नगरपालिकाहरुले पनि क्वारेन्टाइन निमार्ण गर्न सुरु गरे।
कास्की जिल्लाका संक्रमितको उपचार लक्षण भएका र लक्षण नभएका संक्रमितको ३ वटा आइसोलसनमा हुँदै आएको छ।
लक्षण भएका संक्रमितहरुको उपचारमा खटिएको अस्पतालमध्ये एक हो, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठानले चैत महिनामा नै कोरोना रोकथामको निमित्त १० बेडको आइसोलेसन छुट्याउनुका साथै संक्रमितको उपचारका निमित्त स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक नर्सहरुलाई तयारी अवस्थामा राखेको थियो।
पछि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालले १० बेडको आइसोलेसनलाई ४० बेडको बनाउनुका साथै १० बेडको आइसियु छुट्याएको अस्पतालका निर्देशक डा अर्जुन आचार्यले जानकारी दिए। अहिलेसम्म प्रतिष्ठानमा २ सय ९० भन्दा बढी संक्रमित भर्ना भइसकेका छन् भने १५० जना कोरोनामुक्त घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै प्रतिष्ठानमा ११ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
प्रतिष्ठानले संक्रमितको उपचारका लागि आलोपालो गरेर चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी खटाउने गरेको छ। एक पटकमा ११ जनाको चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली उपचारमा खटिने गरेको डा अर्जुन बताउँछन्। अहिलेसम्म १६ जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। तर सबै स्वास्थ्यकर्मी कोरोनामुक्त भएर काममा फर्किसकेका छन्।
सरकारले होम आइसोलेसनको मान्यता दिएसँगै कास्कीमा पनि लक्षण नभएका संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। अहिले २१३ जना लक्षण नभएका संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्।
होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुलाई कुुनै स्वास्थ्य समस्या आएमा वा अस्पताल जानु परेमा त्यसको जिम्मा स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले लिएको स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकृत विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।
‘होम आइसोलेसनमा बसेमा संक्रमितलाई केही स्वास्थ्य समस्या भयो भने कुन अस्पतालमा बेड खाली छ, त्यो बुझेर हामीले अस्पताल लैजाने काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भने।
कास्कीमा चैत महिनादेखि असोज २१ गतेसम्म २ हजार ३०७ जना शंकास्पद कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरु क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छन्। हाल ४७ जना मात्रै क्वारेन्टाइनमा छन्।
स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका ४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेको छ।
कास्कीमा सुरुवाती दिनमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिको पहिचान गर्न निकै समस्या भएको थियो। कोरोनाका बारेमा समुदायमा नकारात्मक सोच भएका कारण कारण संक्रमितहरु आफ्नो पहिचान लुकाएर समाजमा खुलेआम हिँड्ने गरेको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख आचार्यले बताए। जसका कारण कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिने चिन्ता सबैमा थियो।
त्यस्तै कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक भिटिएमको व्यवस्थापन पनि निकै चुनौतीपूर्ण थियो सुरुका दिनहरुमा। अर्काे कुरा, पिपिई लगायतको अभाव पनि उस्तै झेल्नुपरेको थियो।